I-MARMOMAC sesona siganeko siphambili kwihlabathi kushishino lwamatye endalo kwaye simele lonke ubonelelo, ukusuka kwinto eluhlaza ukuya kwiimveliso ezigqityiweyo kunye ezigqityiweyo, ukusuka ekusebenziseni oomatshini kunye neetekhnoloji kwizicelo zamatye kuyilo loyilo .. sibonise into yethu engento yanto kwi po yethu ...
I-IBS 2017 iya kubanjelwa eFreiberg eSaxony. Isixeko ibisisazulu seshishini lezemigodi kangangeenkulungwane kwaye likhaya leBergakademie, iYunivesithi yezemigodi kunye neTekhnoloji esekwe ngo-1765. Imbali yesixeko apho imbali yezemigodi ihlala ikho ...
Umboniso waseTshayina wokuThumela nokuThumela kwelinye ilizwe- iCanton Fair yeyona ntengiso iphambili yase China, intengiso ye canton, imiboniso yorhwebo yase China yalo naluphi na uhlobo kwaye ibanjelwe eGuangzhou (Pazhou Complex). ICanton Fair yeyona ndlela isebenzayo yokuphucula ubudlelwane beshishini ekufuneka ubuphumelele e-China. Ku ...
I-Big 5 sisiganeko esikhethekileyo esidibanisa imiboniso emihlanu ephambili phantsi kophahla olunye. Ngaphezulu kweenkampani ezingama-2.000 ezivela kumazwe angama-50 ezakubonisa kwi-Big 5.One yezona ntengiso ziphumelelayo kurhwebo eDubai, umboniso wezorhwebo wokwakha kunye nokwenza isivumelwano.
ngomphathi ku 20-08-30
UMontary ubambe inkomfa entsha yokukhutshwa kwemveliso eShenzhen, ngexesha apho kukhutshwa iimveliso ezi-4 kwaye abathengi abangaphezulu kwama-200 bezimase inkomfa.Imveliso yethu entsha itsale inani elikhulu labathengi ukuba bafake iiodolo, kwaye bafumana iziphumo ezilungileyo.Ukongeza, entsha. ..
I-Canton Fair yeyona inde kwaye inkulu yokungenisa nokuthumela ngaphandle e-China Ngo-2020, ubambe ngempumelelo iiseshoni ezili-128, kulo nyaka, ngenxa yefuthe lobhubhane, i-Canton Fair ihambile kwi-intanethi. Ukunxibelelana nabathengi bamanye amazwe.